यी १० लक्षण देखिएमा थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्दैछ, छिट्टै डाक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् ! > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) - Taja Report
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीयी १० लक्षण देखिएमा थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्दैछ, छिट्टै डाक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् ! > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
यी १० लक्षण देखिएमा थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्दैछ, छिट्टै डाक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् ! > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
August 31, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on यी १० लक्षण देखिएमा थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्दैछ, छिट्टै डाक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् ! > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले छोड्दैन । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ ।
बिरामीले पैसा तिर्न नसक्दा १५ महिना बन्दी बनायो अस्पतालले, पैसा नतिरे अझै नछोड्ने धम्की ! (भिडियोसहित)